Kamuva, ngabona amazwi kaNkulunkulu kwethi “Umsebenzi Nokungena (2)”: “Lapho umuntu esebenza futhi ekhuluma, noma phakathi nomkhuleko womuntu wokuzinikela kwakhe komoya, iqiniso liyohlala obala kubo. Nokho ngokoqobo, lokho umuntu akubonayo kuwukuphela kokukhanya okulethwa uMoya oNgcwele (ngokwemvelo, lokhu kuvame ukubambisana nomuntu) hhayi isimo sangempela somuntu. Ngemva kwenkathi umuntu adlula kuyo ebunzimeni obuningi, isimo sangempela somuntu siyacaca ezimweni ezinjalo. Kungaleso sikhathi kuphela lapho umuntu ebona khona ukuthi isiqu esingokomoya somuntu asisikhulu kangako, futhi ubugovu, ukuzicabangela yena yedwa, kanye nomhobholo womuntu konke kuyavela. Kungemva kweziwombe eziningi kuphela zalezo zinto lapho iningi lalabo abavusiwe emoyeni wabo beyobona khona ukuthi bebengekho esimweni sangempela, kodwa ukukhanya kwesikhashana koMoya oNgcwele, futhi umuntu wakuthola ukukhanya. Lapho uMoya oNgcwele ukhanyisela umuntu ukuze aqonde iqiniso, lokho uvamise ukukwenza ngendlela ecacile nengagwegwesi, ngaphandle komongo. Lokho kusho ukuthi, akahlanganisi ubunzima bomuntu kulesi sambulo, kunalokho ulembula ngokuqondile iqiniso. Lapho umuntu ehlangabezana nobunzima ekungeneni, umuntu ube eseba nokukhanya kukaMoya oNgcwele, futhi lokhu kuba yinto umuntu abhekana nayo ngokoqobo” (Izwi Livela Lisenyameni). Njengoba bengicabanga ngalesi siqeshana, ngaqonda ukuthi: Iqiniso engiliqondile ngenkathi ngisiza udade ukuxazulula inkinga yakhe, livele ekukhanyiselweni nguNkulunkulu. Kungenxa yokusebenzisana ngaleso sikhathi okwenza ukuba ngithole ukukhanyiselwa uMoya oNgcwele. Kodwa kwakungesona isimo sami ngempela futhi besingakhombisi ukuthi ngithole leso sibonakaliso seqiniso. UMoya oNgcwele ungikhanyisele ukuba ngiqonde iqiniso ngaleso sikhathi ngoba bekubalulekile emsebenzini wami, futhi ngokusebenzisana wangisiza ukuxazulula izinkinga nobunzima emsebenzini wami. Kodwa ngaphambi kokuthola ulwazi lwangempela kulolu daba, isimo sami sasisesincane. Manje uma ngihlangabezana nobunzima ekungeneni, kungokuhlanganyela ekukhanyiselweni uMoya oNgcwele lapho lapho iqiniso liba khona ukuphila kwami.
Okwedlule：Ikhona Indlela Yokunqoba Ukuzikhukhumeza